နည်းပညာ ဖလှယ်ရာ: Task Manager ကို .Bat File ဖြင့်ဖွင့်၍ အသုံးပြုနည်း
Task Manager ကို .Bat File ဖြင့်ဖွင့်၍ အသုံးပြုနည်း
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုရာ၌ ထိုကွန်ပျူတာအတွင်း Install ပြုလုပ်ထားသည့် Software များ၊ Application များကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် Task Manager ကိုဖွင့်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Keyboard မှ Ctrl+Alt+del ကိုနှိပ်၍ဖြစ်စေ၊ Taskbar ပေါ်တွင် Right Click ထောက်၍ Task Manager မှတစ်ဆင့်ဝင်၍ဖြစ်စေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အချို့သော ကွန်ပျူတာများတွင် Task Manager ကိုကြည့်ရှုမရနိုင်စေရန် ပိတ်ထားတတ်ကြပါသည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုရသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သည့်ကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြုရသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ မိမိ၏ personal Data များကိုခိုးယူခြင်းမခံရစေရန် သတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိအသုံး ပြုနေသော ကွန်ပျူတာတွင် Keylogger ကဲ့သို့သော Software မျိုးကို Install ပြုလုပ်ထားပါ က Keyboard မှ ရိုက်လိုက်သည့် စာလုံးများကို မှတ်သားထားခြင်း၊ ကွန်ပျူတာတွင် အသုံးပြုမှုမှန်သမျှကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းတို့ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသည့် Personal Data များကို ခိုးယူခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သည့်ကွန်ပျူတာများကို စတင်အသုံးပြုသည်နှင့် Task Manager ကိုဖွင့်၍ ကွန်ပျူတာတွင် Install ပြုလုပ်ထားသည့် Software များကို ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ Task Manager ကို ပိတ်ထားပါက အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပြုလုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-
၁။ Start \_ All Program \_ Accessories မှ Notepad ကိုဖွင့်ရပါမည်။
၂။ Notepad တွင် အောက်ဖော်ပြပါ Code များကို Copy ကူး၍ ထည့်ပေးရပါမည်-
CD /D “!TEMP!”
!TASKLIST! /FI “USERNAME eq !NAME!” /FO TABLE /NH >”plist.txt”
for /f “tokens=*” %%a in (plist.txt) do (
Del /f /q “plist.txt” >nul 2>&1
Title !NAME! – [!num!] Process Running.
if /i “!NAME!”==”%USERNAME%” goto :USR
if /i “!NAME!”==”SYSTEM” goto :SYS
if /i “!ac!”==”K” goto :Kill
if /i “!ac!”==”S” goto :SYSTEM
if /i “!ac!”==”U” goto :USER
if /i “!ac!”==”E” goto :Explore
set /p “ac=Action : “
set /p “PID=PID : “
echo.Can’t kill Critical Process
!wmic! process get ProcessID,ExecutablePath >”path.txt”
for /f “tokens=1,2 delims= ” %%a in (‘type “path.txt” ^| !FIND! ” !PID! “‘) do (
) else (START !Explore! “!exepath!”)
Del /f /q “path.txt” >nul 2>&1
၃။ ထို့နောက် .Bat File Type ဖြင့် Save ပေးရပါမည်။ File Name ကို နှစ်သက်ရာပေးနိုင်ပါ သည်။ ဥပမာ task.bat ဟုဖြစ်ပါသည်။
၄။ ထို Save လုပ်ထားသည့် .bat File ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါက Command Prompt ဖြင့် Task Manager ကဲ့သို့ ကွန်ပျူတာတွင် Install ပြုလုပ်ထားသည့် Software များ၊ Application များ၊ Processes များ စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေးနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ System ကိုကြည့်ရှုလိုပါက S ဟုရိုက်၍ Enter ကိုနှိပ်ရပါမည်။ ထိုအခါ ကွန်ပျူတာ system မှ အသုံးပြုထားသည့် executable file များကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ကွန်ပျူတာတွင် Install ပြုလုပ်ထားသည့် Software များကို ကြည့်ရှုလိုပါက u (User ၏ အတိုကောတ်) ကိုရိုက်ထည့်၍ Enter ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၇။ Install ပြုလုပ်ထားသည့် Software များအနက်မှ Kill ပြုလုပ်လိုသည့် Software ရှိပါက k ဟုရိုက်၍ Kill ပြုလုပ်လိုသည့် Software ၏ PID(Process Identifier) no ကိုရိုက်ပြီးနောက် Enter ကိုနှိပ်ပြီး Kill ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ PID(Process Identifier) no များကိုပါ ဖော်ပြပေး ထားပါမည်။